वर्डप्रेस प्लगइन मार्फत रेफरर स्पाम कसरी रोक्ने - Semalt सल्लाह
रेफरर स्पामले तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातालाई नक्कली जानकारीको साथ प्रदूषित गर्दछ र इन्टरनेटमा तपाईंको सामग्री प्रमोट गर्न कम-गुणवत्ता ट्राफिक प्रयोग गर्दछ। जब तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताले धेरै विचारहरू देखाउँदछ, संभावना तपाईंको साइटले नक्कली ट्राफिक प्राप्त गर्न सुरु गरेको छ। स्प्यामरहरूले राजस्व उत्पन्न गर्न बिभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गर्छन्, र जब तपाइँ रेफरर स्पाम लि links्कहरूमा क्लिक गर्नुहुन्छ तिनीहरूको इन्टि। खोज ईन्जिन परिणामहरूमा सुधार हुनेछ। जब तपाईं तिनीहरूको लिंकहरूमा क्लिक गर्नुहुन्न, उनीहरूले तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स रिपोर्टहरू पेस गर्दछ, र तपाईं आफ्नो व्यवसायमा प्रदूषित रिपोर्टहरू कसैलाई पनि साझेदारी गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। भाग्यवस, केहि वर्डप्रेस प्लगइनहरू तपाईंको गुगल एनालिटिक्स डाटालाई प्रभावित गर्न र तपाईंको साइटमा पहुँच गर्नबाट रेफरर स्पाम रोक्न डिजाइन गरिएको छ।
ओलिभर किंग, Semalt को ग्राहक सफलता प्रबन्धक, यहाँ यस सम्बन्ध मा केहि मनमोहक मुद्दाहरु प्रदान गर्दछ।
कसरी सुरू गर्ने?
यदि तपाईंले आफ्नो वेबसाइटमा गुगल एनालिटिक्स कहिल्यै प्रयोग गर्नुभएको छैन भने, यो सुरू गर्नका लागि उत्तम उपकरण हो। गुगल एनालिटिक्सले तपाईंलाई कसरी तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा प्रयोगकर्ताहरू अन्तर्क्रिया गर्दछन्। तपाईं कुन लेख अन्य भन्दा अधिक यातायात प्राप्त देख्न सक्नुहुन्छ। लिंकमा क्लिकहरू ट्र्याक गर्न र विभाजन परीक्षणहरू चलाउन यो सम्भव छ। सबैजना आफ्नो वेबसाइट इन्टरनेट मा ध्यान दिएको चाहान्छन्, तर रेफरर स्प्यामरहरू हाम्रो साइटहरूमा नक्कली दृश्यहरू पठाएर हाम्रो SEO प्रविधिको फाइदा लिन्छन्। इन्टरनेटमा हाम्रो साइटको रैंक बिगार्न उनीहरूले सयौं हजार स्क्रिप्ट र कोड सम्मिलित गर्छन्। उनीहरूको URL हरू तपाईंको गुगल एनालिटिक्समा देखा पर्दछ र असंख्य वेबसाईटहरू प्रत्येक महिनामा असर गर्दछ।
तपाइँ किन रेफरर स्पामको बारेमा चिन्ता लिनु पर्छ?
केहि व्यक्तिले सोच्न सक्दछ कि रेफरर स्पाम हानिरहित र सुरक्षित छ जबसम्म कोहीले लिंकमा क्लिक गर्दैन, तर यो त्यस्तो छैन। जब तपाईं लि on्कहरूमा क्लिक गर्नुहुन्न, रेफरर स्पामले तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स रिपोर्टहरूलाई प्रभाव पार्दछ। साना र मध्यम आकारका व्यवसायहरूका लागि, रेफरर स्पाम ठूलो खतरा हुन सक्छ किनकि यसले उनीहरूको साइटहरूलाई कुनै पनि समयमा बर्बाद गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट मार्फत केहि बेच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं अपेक्षित ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्न सक्नुहुन्न रेफरर स्पामको कारण।
प्लगइनहरूको साथ वर्डप्रेसमा रेफरर स्पाम ब्लक गर्दै
वर्डप्रेस प्लगइनहरूको एक जोडीले तपाईंलाई न्यूनतम न्यूनतममा रेफरर स्पाम राख्न मद्दत गर्दछ। सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा यो हो कि यी सबै प्लगइनहरू नि: शुल्क छन् र चाँडै स्थापना गर्न सकिन्छ। हामी हानिकारक प्रभावहरूको लागि जिम्मेवार छैनौं र भुक्तान गरिएको समर्थन वा निर्देशनहरू प्रदान गर्दैनौं, त्यसैले तपाईंले कुनै पनि WordPress प्लगइन स्थापना गर्नु अघि सधैं फाइलहरू जगेडा गर्नु पर्दछ।
स्प्याम रेफरर ब्लक
यो नि: शुल्क प्लगइन हो, लेखकद्वारा स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गरिएको कालोसूचीहरूको प्रयोगको लागि प्रख्यात छ। एकचोटि पूर्ण रूपमा स्थापना भएपछि, प्लगइन कन्फिगर गर्न सजिलो हुन्छ र तपाईंको साइटमा सुविधाजनक रूपमा थप्न सकिन्छ।
केहि नयाँ प्लगइनहरू, जस्तै रेफरर स्पाम अवरोधक र ब्लक रेफरल स्पाम, केही हप्ता अघि प्रस्तुत गरिएको थियो, तर यी प्लगइनहरूले आलोचकहरूबाट सन्तोषजनक टिप्पणी प्राप्त गरेनन्, त्यसैले तिनीहरूलाई राम्रोसँग न्याय गर्न सम्भव छैन।
कृपया जानकारी दिनुहोस् कि वर्डप्रेस प्लगइनहरूले प्रेत स्प्यामलाई masmasters.org, webmaster-traffic.com, darodar.com, र co.lumb.co बाट रोक्न सक्दैन। हामी तपाईंलाई गुगल एनालिटिक्स खातामा रेफरर स्प्याम फिल्टर आउट गर्न सिफारिस गर्दछौं तपाईंको साइटलाई झूटा रेफरर भेटहरूबाट रोक्नको लागि।